Masaajidka ugu Weyn Caasimadda Ruushka ee Moscow oo Maanta xariga laga jaray (SAWIRRO) |
Masaajidka ugu Weyn Caasimadda Ruushka ee Moscow oo Maanta xariga laga jaray (SAWIRRO)
Kamagra Polo online, acquire clomid. Munaasabad Xarigga looga Jarayay Masjid Weyn oo laga dhisay Magaalada Moscow ee Xarunta Dalka Ruushka ayaa Waxaa ka Qayb-galay Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan iyo Hoggaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabbaas.
Masjidkan oo ah midka ugu weyn dalka Ruushka oo dhan ayaa wuxuu dhismihiisu socday muddo 10-sano ah, waana Masaajidkii ugu weynaa ee laga dhiso Ruushka, waxaana goobta laga sheegay inay markiiba ku tukan karaan 10,000 oo qof.
Dhaqaalaha ku baxay dhismaha Masaajidkan ayaa la sheegay inuu dhan yahay 170-Milyan oo Doollarka Mareykanka ah, waxaa bixiyay dad deeq-bixiyeyaal ah; iyadoo la sheegay in lagu tukan doono Maalinta Berri ah oo ay billaabanayso Ciidul-Adxada.
Vladimir Putin oo tan iyo markii Hogaanka dalkaas loo doortay Sannadkii 1999-kii Dagaal kula jiray xoogag Islaamiyiin ah oo ka Dagaallama Koonfurta Ruushka; ayaa khudbadii uu ka jeediyay Munaasabadda Furitaanka Masjidkan wuxuu ku boorriyay Hoggaamiyeyaasha Muslimiinta Ruushka inay ka hortagaan Xag-jireynimada.
“Hoggaamiyeyaasha Muslimiinta dalka Ruushka Waxaan ku boorinayaa inay si geesnimo leh u isticmaalaan Awooddooda ayna ka Hor-tagaan fikradaha Xagjirnimada. Waxaana ku Amaanayaan madaxdaas inay ka hortagaan kuwa dhibaatooyinkaas wada,” ayuu yiri Putin.
Diinta Islaamka waa tan labaad ee ugu weyn Ruushka, iyadoo muslimiinta ku nool dalkaas ayay tiradoodu tahay 23 Milyan oo qof, kuwaasoo badankood ku nool waqooyiga Ruushka.
Sidoo kale, Muslimiinta ku nool Magaalada Moscow ee Caasimadda ah ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 2-Milyan oo Qof, iyadoo dalka Ruushka ay daris yihiin waddamo badan oo Muslimiinta ah, kuwaasoo shacabkoodu ay booqdaan dalkaas.
Masaajidkan cusub oo dib u dhiskiisa la billaabay sannadkii 2005-tii ayaa dhulka baaxadda leh ee uu ku fadhiyo waxaa laga Bur-buriyay masaajido yar-yar oo Qaarkood dhisnaa in ka badan 100-sanadood ama hal Qarni
Dhanka kale, Masjidkan cusub oo ku fadhiya dhul ballaaran ayaa waxayaa waxaa markiiba ku tukan kara 10,000 oo qof, iyadoo Masjidkan uu LIX ku noqonayo Masaajidda ku yaalla Moscow.
Ugu dambeyn, Hoggaamiyeyaasha diinta Islaamka oo loogu baaqay inay dhisaan masaajid fara badan ayaa sheegay in ay horay Mucaaradad ugala Kulmeen Qaar ka mid ah Shacabka dalka Ruushka ee aan Aaminsanayn Islaamka.